Jacaylka caruusadaha dhabta ah ee silikoon TPE caruus jacayl jaban oo iib ah
My Ugu Macaan Real Lifelike Jacayl Doll Ragga Iyo Haweenka
Ma rabtaa inaad iibsato caruusadaha jacaylka jaban? Waxaan dammaanad ka qaadi doonnaa madaddaalada qof walba. Caruusadda jacaylka caruusadda waxaa lagu farsameeyaa silica gel ama TPE (elastomer thermoplastic). Labadan shay ayaa gebi ahaanba aan waxyeello u lahayn caafimaadka. Blonde, brunette ama brunette - dukaamadayada, waxaad ka heli doontaa dhammaan caruusadaha la qiyaasi karo ee ku habboon dhadhan kasta iyo miisaaniyad kasta. Waad ku labisan kartaa dharkaaga jacaylka jilicsan ee dharka hoosta ah ee aad dooratay dhadhanka ama qaab kasta oo kale oo moodel ah oo aad rabto. Qaado waqti aad ku dhex maraan moodooyinkayaga kala duwan oo aad naftaada ku qanciso shaqada gaarka ah ee caruusadda ama xulashada wejiyada badan ee caruusadda. Sida haweeney dhab ah, waxaa jira siyaabo badan oo loo maro doll dhab ah. Afkeeda, gacmaheeda iyo naasaheeda, Vagnia-keeda oo ku tiirsan urta futada, dhalanteedyada oo dhami waxay noqon karaan kuwo dhab ah. Hadaadan helin caruusadaha jacaylka wanaagsan ee aad raadineyso. Ama hadaad rabto inaad sameysato boombalo khiyaali ah, fadlan nala soo socodsii. Weydii su'aalahaaga ama talo soo jeedintaada waxaanan ku dadaalaynaa inaan ku caawinno.
Angelia-Big Tits G-cup Fat Butt Long Lugaha Dheer 174cm Haweeney Qaangaadh ah oo sexy Doll
Maxwell - 160CM Gabar Bunny Oo Soo jiidasho Leh Gabar Dabo Weyn BBW Sex Doll
Florence - 150CM C-cup European Style Brown Maqaarka TPE Jinsiga Doll
Athena - C Cup Dhexdhexaad Yar Timo Gaaban 163CM Qiyaasta Buuxda ee Jacaylka Doll
Dollhouse 168 Indhaha Madoow ee Weyn 156CM SaSa Japanese Doll EVO Version TPE
Shirley - Jilicsan Oo Waara GYNOID 6 Madaxa Silicone Japanese Xaaska Dutch RZR
148CM Maqaarka jirka Qamadi Maqaar yar Ibta TPE Love Doll Yetta
Yasuko - RZR Jacaylka Doll Jilitaanka Farta Aadanaha Wadajirka Japan 160CM Dolls Dolls Dolls
Nolosha dhabta ah ee ugu Fiican Jidhka Jilicsan ee Jaceylka Jaban
Fiidiyowyo badan oo faa'iido leh oo ku saabsan caruusadaha jacaylka: